Gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo loo diiday garaanka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaGudoomiyaha ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo loo diiday garaanka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
19/06/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa loo diiday in uu galo garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa u diiday in uu garoonka ka dhaafo Guddoomiyaha iyo Wafdigiisa oo dalka dibadiisa u doofi rabay.
Waxaa uu sheegay in uu ka baaqday Safar uu socday ka dib markii loo diiday in uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu ka dhaafo gudoomiyaha iyo wafdigiisa.
Sidoo kale Gudoomiyaha Aqalka Sare iyo ku xigeenkiisa Koowaad Saacaddo badan lagu xanibay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada AMISOM Waxa ay sheegeen in saddex Mas’uul kaliya loo ogol yahay in ay garoonka la galaan ciidamo hubeeysan taas ayaana sababtay in la ciliyo masuliyiintan.